Kedu ihe bụ outsourcing na kedụ uru ọ bara maka Ecommerce? | ECommerce ozi ọma
El Nweta ego bụ usoro nke ụlọ ọrụ Ecommerce na-azụ ụlọ ọrụ ọzọ ilekọta ọrụ mpụga na-enweghị iji ndị ọrụ gị n'ọrụ. A maara nke a dịka "ịpụ apụ" ma taa, ọ na - aghọ ọrụ dị mfe maka ọtụtụ azụmaahịa dị n'ịntanetị.
1 Kedu ihe bụ outsourcing?
2 Kedu uru nke ịpụ apụ na azụmahịa e-commerce?
Kedu ihe bụ outsourcing?
Na outsourcing, ọtụtụ ụlọ ọrụ e-commerce ọpụpụ ọrụ mpụga iji mepụta ọrụ dị iche iche na arụmọrụ dị ka nnyefe ngwaahịa. Echiche nke Mbupu na Ecommerce bụ imezi njikwa e-commerce na ebumnuche kachasị nke ịbelata ụgwọ.
Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ ndị na-ego ọrụ Ọrụ ịpụpụ Ha bụ ụlọ ọrụ Ecommerce dị obere na ọkara. E nwekwara ọtụtụ ụzọ a Companylọ ọrụ na-enyefe mmadụ ego O nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka maka azụmaahịa ndị a dị n'ịntanetị ebe ha nwere ike ịnye atụmatụ weebụ, mmepe yana ọrụ njikwa arụmọrụ, enwere ike goro ha ụgwọ iji kwalite azụmahịa ma ọ bụ ngwaahịa na ntanetị.
Kedu uru nke ịpụ apụ na azụmahịa e-commerce?
na uru nke ịpụ na ecommerce Ha na-amalite na eziokwu na ọ bụ ọrụ bara uru. Mkpa maka azụmaahịa Ecommerce iji belata ọnụ ahịa ọrụ bụ kpọmkwem otu ihe kpatara ọrụ ndị a jiri ewu ewu. Companieslọ ọrụ na-apụ apụ nye lọjistik na ndị ọzọ ọrụ ka online ahịa na a ọzọ oké ọnụ price.
Yabụ, ọtụtụ azụmaahịa e-commerce na-atụgharị anya maka ịchekwa ego na usoro ọrụ ha. Tụkwasị na nke a, anyị niile maara na azụmaahịa dị n'ịntanetị na-asọ mpi nke ukwuu, ya mere a Ecommerce nwekwara ike irite uru site na Outsourcing ekele na nkwalite na njikarịcha nke azụmahịa gị na Internetntanetị.
Yana n'elu, na Sourgba n’èzí nwere ike inye gị iwu ka enyere gị iwu site na usoro nhazi na oru uzo. You nwere ike ịnweta netwọk na nkesa na nkesa na mgbe ihe a niile na-eme, gbado anya na azụmahịa Ecommerce gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Kedu ihe bụ outsourcing na kedụ uru ọ bara maka Ecommerce?
Edemede mara mma banyere outsourcing n'ime ecommerce. Echere m na ọ bụ omume na, na-arịwanye elu, ụlọ ọrụ ndị pere mpe na ndị na-ajụ ọkara nke raara onwe ha nye ahịa n'ịntanetị ga-enwerịrị ike tolite ma nwee oke mgbanwe mgbe ha chere ụbọchị dị ka Black Friday ma ọ bụ Christmas.
N’ụlọ ọrụ m TURYELECTRO, anyị raara onwe anyị nye inye ọrụ ndị a.
Zaghachi Carlos Ayuso
Etu ị ga-esi akwadebe Ecommerce gị maka Black Friday (Black Friday)